Halka lagu aasayo Mugabe oo la isku haysto - Jigjigaonline
HomeWararka CaalamkaHalka lagu aasayo Mugabe oo la isku haysto
September 9, 2019 admin Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Harare (JigjigaOnline) –
Geesiyaashii Zimbabwe badankooda oo ay ku jiraan kuwii la dagaallamay xukunkii tirada yaraa ayaa lagu aasaa xabaalaha Heroes’ Acre oo ku yaal duleedka magaalada Harare.
“Wuu niyad jabay. Bal ka waran dadkii aad aamintay, dadkii ku ilaalinayey ee kaa warhayey, ilaaladaadii oo mar qudha uun isku kaa rogay. Aad buu u niyad jabay, soo yaalkiisiina dhacadadaasi way dhaawacday” ayuu yidhi.
“Culays baa i saaran sababta oo ah waxaan ku hano qaaday wakhtigii dalka uu hogaaminayey ninkii xoreeyey, haatanna dhintay”.
Laakiin wadaadku wuxu aad ugu niyad samaa sida uu ninkaasi Zimbabwe gobanimada ugu horseeday 1980-kii noloshiisii dheerayd ugu qanacsanaa, “diyaar buu u ahaa inuu hoydo, wuuu doonayey inuu hoydo waanu filayey sidaas” ayuu yidhi.